यी हुन् घुम्नै पर्ने नेपालका दश उत्कृष्ट गन्तव्य (तस्विर सहित) – Medianp
यी हुन् घुम्नै पर्ने नेपालका दश उत्कृष्ट गन्तव्य (तस्विर सहित)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १३, २०७४०९:०४
काठमाडौं, १३ माघ । नेपालमा पछिल्लो समय बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक पर्यटन समेत फस्टाएको छ । विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकहरूको उपस्थिती निकै बाक्लो हुने गरेको छ । नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा रहँदै आएको छ । यहाँका केही यस्ता ठाँउ छन्, जहाँ जो कोहीलाई पनि जाने इच्छा जाग्दछ । यदी तपाईलाई पनि घुम्ने सोख छ भने भने तपाईले यी दश ठाँउ नछुटाउनुहोस् ।
पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउन हुन थालेको रारामा पर्यटकलाई जान सहज हुन थालेपछि विदेशी पर्यटकहरू पनि ठूलो संख्यामा जाने आशा गरिएको छ । रारा जानको लागि फागुनदेखि जेठ मध्यसम्म र असोजदेखि मंसिरसम्मको समय उपयुक्त हुन्छ ।
म्याग्दी जिल्लामा रहेको पुनहिल ३ हजार २ सय १० मिटर उचाइमा रहेको छ ।
अन्नपूर्ण पदमार्ग क्षेत्रको एउटा मुख्य भागको रूपमा रहेको पुनहिलमा ३० वटा होटल छन् । सो क्षेत्रमा एक रातमा ७ हजार पर्यटक राख्न सक्ने क्षमता छ ।
हिन्दू र बुद्धमार्गीको समेत तीर्थस्थल रहेको मुक्तिनाथ क्षेत्र पर्यटकको लागि आकर्षक गन्तव्य हो । ३ हजार ७ सय १० मिटर उचाइमा रहेको उक्त भ्याल्लीले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको मुख्य गन्तव्य स्थलको रूपमा पहिचान कमाएको छ ।
खप्तड जानको लागि चैत र वैशाख तथा असोज–कात्तिक महिना उपयुक्त हुन्छ । पछिल्लो समय नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा पर्यटन व्यवसायी संस्थाहरूले खप्तड जानको लागि स्वदेशी तथा विदेशीका लागि प्याकेजसमेत घोषणा गरेका छन् ।
५. कोशी टप्पु
कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र समेत अर्को उत्कृष्ट गन्तव्य हो । १ सय ७५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको कोशीटप्पु सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लामा फैलिएको छ ।
नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको इलामको मुख्य आकर्षण भनेको चिया बगान हो । रमणीय स्थानमा रहेको बगानले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आएको छ ।
इलाममा चिया बगानको साथै पिकनिक स्पट तथा साइट सिनको लागि आकर्षक स्थान छन् । इलाम जा असोज, कात्तिक, मंसिर तथा फागुन, चैत र वैशाख उपयुक्त मानिन्छ ।
७. बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज
सन् १९६८ मा शाही शिकार आरक्षको रूपमा स्थापना गरिए पनि सन् १९६७ मा करिब ३६८ वर्ग्किलोमिटर क्षेत्रफलको उक्त आरक्षणलाई शाही कर्णाली वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा घोषणा गरियो । उक्त क्षेत्रमा जानको लागि हवाई तथा सडक दुवै मार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ । हवाई मार्गमार्फत जान काठमाडौंबाट नेपालगन्जको उडानमा जानुपर्ने हुन्छ ।
जंगलसँग रमाउँदै बोट लिएर चराचुरुंगी हेर्नको लागि नवलपरासी आर्कषक गन्तव्य हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने उक्त क्षेत्रमा १ सय १४ प्रजातिका चराचुरुंगीहरूको अवलोकन गर्न पाइन्छ ।
नवलपरासी वरपर पछिल्लो समय सुविधासम्पन्न होटल तथा रिसोर्टसमेत खुलेका छन् । हात्ती सफारीमार्फत जंगली जनावरहरूको अवलोकन गर्न समेत पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे एउटा निर्णय, जाे एक महिना लुकाइयाे
पाँचथरमा जीप दुर्घटना, दुईको मृत्यु
हङ्गकङ्गमा निलिमा थापामगर र प्रगति पुन के गदैछन् ! (भिडियोसहित)
सुन्दर तस्विरको कारण यी साधारण युवती भइन् रातारात भाइरल ! हेर्नुहोस् १३ तस्विरमा